Aqrisa Magacyada Dadkii dhintay iyo kuwa wali lagu la layahay Xeebaha Liibiya iyo Talyaaniga - iftineducation.com
iftineducation.com – Safaarada ee Dowlada Soomaaliya ku leedahay Dalka Liibiya ayaa soo bandhigtay Qaar kamid ah Magacyada Dad ku dhinteen dooni ee lasocdeen oo ku degtay Xeebaha Dalka Liibiiya iyo Talyaaniga iyo kuwa wali la layahay Nolol iyo geeri.
Doonidan degtay ayaa la sheegay in ee saarnaayeen ilaa 56-qof oo Soomaali ah kuwaa oo ka shiraacday Xeebaha Liibiya kuna sii jeeday Dalka Talyaaniga si halkaasi uga sii gudbaan eena nolol ka raadsadaan Dalalka Reer Yurub.
Qaar kamid ah Dadkaan magacyadooda la shaaciyay ayaa ah kuwa Dhintay oo Meedadkooda soo caariyeen Badda lagana helay Xeebta Magaalada Misraata ee Dalka Liibiya iyag oo meed ah.
Waxaan la sheegay in dadkaasi ahaayeen ilaa 17-qof oo 14-kamid ahaayeen Haween hal Caruur ah iyo labo rag ah kuwaa oo dhamaantood lagu aasay Dalka Liibiya.
Waxaana loo badinayaa in ee Dhinteen tirada kale ee la layahy oo lagu sheegay tiradooda ilaa 39-qof kuwaa oo doonidii siday 14-kii bishaan ka baxday Xeebaha Liibiyana lana waayay war iyo wacaadkood.
Hadaba Aqriso Magacyada Qaar kamid ah dadkaasi dhintay iyo kuwa La layahay oo Magacyadooda la helay.
1.C/Qaadir Maxamed Jimcaale
2.Muxuyadiin Xaaji Cllhi Fiidoow
3.Mowliid Xuseen Cabdi Qoobdheer
4.Shiikh Xasan Cali Xaanshi
5.Xasan Mowliid Cismaan (jees bile)
6.Maxamed Aadan Hurwaa
7.Aadan C/qaadir Aadan ( aadan baale) dhintay)
8.Xuseen Cali Garaash
9.C/raxmaan Maxamed Nuur (amaan)
10.Liibaan Xasan Ibraahim
11.Maxamed Feysal B/weyn
12.C/maalik Xasan Shiikh Ibraahim
13.Saciid Maxamed Faarax
15.Dhaqane Maxamed Ciiloow
16.Saleymaan Sabriye Siyaad
17. Cali Maxamuud Cawad
18.C/risaaq Maxamed Nuur (ruush)
19.C/raxmaan Maxamed Macalin Gurey( xaam)
20.Xasan Maxmed Cali gaab
21.C/qaadir Farax Xiriyo (madaxay)
22.C/fitaax Guuleed Clle
23.Ismaaciil Xuseen Barre
24. Cabdi Muxudiin Guure (Cabdi faroon)
25.Axmed Xasan Dhaqane
26.Naciimo Cabdi Cllhi
27.Malyuun Cumar Axmed
28.Nafiso Cilmi Siyaad
29.Maryan Xuseen Cali (Dhimatay)
30.Aniso Macalin Gureey
31-Xasan Yuusuf Cali
32-Sacdiya Maxamad Nuur